मार्बलको सरसफाई कसरी गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
मार्बलको सरसफाई कसरी गर्ने ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ २१, २०७८ 39
घरलाई सजाउनका लागि एकातिर मानिसहरु टायल लगाउन मन पराछन् भने अर्कोतिर केही मानिसहरु घरमा मार्वल लगाउन समेत मन पराउँछन् । घरमा मार्वल लगाउनु त नौलो कुरा होइन, तर तीनको सरसफाइ कसरी गर्ने भन्ने कुरा भने आफैंमा एउटा भिन्नै काम हो ।
—मार्वल पुछ्ने क्रममा पानीलाई परिवर्तन गरिरहनु पर्छ, पुरै घरभरीको मार्बलका लागि एउटै पानी प्रयोग गर्नु हु“दैन । त्यो पानीले धुलो सफा हुनुको साटो उल्टै मार्वलमा धुलो टासिन्छ ।
यसबाहेक बजारमा फ्लोरलाई ढाक्ने विशेष प्रकारको प्लाष्टिकको म्याटहरु पनि उपलब्ध छन्, त्यसको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त म्याटले पुरै फ्लोरलाई नै ढाक्न सकिन्छ । यदि उक्त म्याट पनि फोहोर भयो भने तपाईंले प्लाष्टिकको खोललाई निकै सजिलै सफा गर्न सक्नुहुनेछ । यसप्रकार धेरै मेहनतबिना नै तपाईंले आफ्नो घरको भुईंलाई सधैंका लागि चम्काउन सक्नुहुन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार